MTHULI Ncube lives in Meikles hotel, earns US $ pays Zimbabweans in RTGS, lest you forget Mugabe earned US$ and paid Zimbabweans in bond notes. – newzimbabwevision
Posted on May 30, 2019 May 30, 2019 by newzimbabwevision
It is against this unfair reality that Mthuli Ncube and Mangudya have been told to resign by the former MDC-T Spokesperson Linda Masarira.
She has demanded the resignation of the Reserve Bank Governor Dr John Panonetsa Mangudya and Finance Minister Professor Mthuli Ncube for failing to solve the Zimbabwe economic crisis.
The RTGS Dollar currency is losing value daily when traded against the United States Dollar and on Wednesday the RTGS was trading at 1:7, a sign that the Minister of Finance Mthuli Ncube and the RBZ Governor John Mangudya have failed to fix the Zimbabwe economic crisis and worse still, have no explanation for the failure of the econiomy.
It is no surprise that the newly elected MDC Treasurer General David Coltart has accused the Minister of Finance Ncube Mthuli of experimenting on the lives of the suffering Zimbabweans , adding that Mthuli Ncube stays at the luxurious Meikles hotel in Harare and is paid in United States Dollars not RTGS like the ordinary suffering Zimbabweans.More news to follow. Sibusiso Ngwenya.